မြဝတီ - COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နေရပ်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်အခက်အခဲရှိနေသည့် နီပေါ နိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခေါ်ယူပေး၊ နီပေါ တပ်မတော်အတွက် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအထောက်အကူပြု ဆေးပစ္စည်းများ တပ်မတော်မ
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နေရပ်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်အခက်အခဲရှိနေသည့် နီပေါ နိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခေါ်ယူပေး၊ နီပေါ တပ်မတော်အတွက် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအထောက်အကူပြု ဆေးပစ္စည်းများ တပ်မတော်မ
Friday, 05 June 2020 21:16	font size decrease font size increase font size
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နီပေါနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသည် တင်လေယာဉ်များ ပျံသန်းမှုယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသူများနှင့် အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ နီပေါနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့် နီပေါနိုင်ငံသား များအား တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့် ယနေ့ပို့ဆောင်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အခက်အခဲရှိနေသည့် နီပေါနိုင်ငံသား သံဃာတော် ၂ ပါးနှင့် သီလရှင် ၁ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၃ ဦးတို့ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဒုံလေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်လေယာဉ်ဖြင့် နီပေါနိုင်ငံ၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့သို့ ပို့ဆောင်ပေးရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim Krishna Udas နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်နှင့်အတူ နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် နီပေါ တပ်မတော်အတွက် တပ်မတော်က လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက်အကူပြုဆေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Surgical Mask ၁၀၇၀၀ ခု၊ N95 Mask ၆၀၀ ခု၊ Face Shield ၂၅၀ ခု၊Sodium Hypochloride (15L) ၅ ပုံး၊ Personal Protective Equipment (PPE) ဝတ်စုံ ၁၀၀ စုံ၊ Examination Glove ၁၀၀၀ ခု၊ Non Contact Thermometer ၁ ခု၊ Hand Gel ၁၆၅ ဘူးနှင့်Hand Sanitizer ၁၆၅ ဘူး တို့ပါရှိသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် မွန်မြတ်ကရုဏာရှင်များအဖွဲ့ (Noble Compassionate Volunteer Group-NCV) လူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့မှ နီပေါနိုင်ငံ၌ ဆောင်ရွက်နေသည့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လှူဒါန်းသည့် Personal Protective Equipment (PPE) ဝတ်စုံ ၅၃ စုံ၊ PersonalSurgical Mask ၃၀၀၀ ခု၊ N95 Mask ၃၀၀ ခု၊ Face Shield ၄ ခု၊ Protection Goggle ၃၆ ခု၊ Gloves ၅၀၀ ခု၊Lasor Temperature ၁၀ ခု၊ Ozone ၁၀ ခု၊ Oxygen Concentrator ၁၀ ခု၊ 4G GSM Mobile Phone ၁၀ လုံးတို့ကိုလည်း ကူညီသယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်သည် နီပေါနိုင်ငံ၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့သို့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိခဲ့ရာ နီပေါနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုဆေး ပစ္စည်းများကို လေယာဉ်မှူး ဗိုလ်မှူး အောင်ကိုကိုက လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းရာ နီပေါ တပ်မတော်မှ Brigadier General Ashish Narshing Rana နှင့် နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ နိုင်ငံသံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးဝင်းမြင့်တို့က အသီးသီးလက်ခံ ရယူကြသည်။
ထို့နောက် နီပေါနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည် ရောက်ရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား သံဃာတော် ၄ ပါး၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ၃၇ ဦးနှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံသံရုံး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ လိုက်ပါမည့် နီပေါနိုင်ငံသား ၂ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၃ ဦးတို့ကိုခေါ်ဆောင်၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာရာ ညနေ ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim Krishna Udas နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါ နီပေါနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများအား ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် တွင် ကနဦးကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော Quarantine Centre များသို့ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 79 times	Last modified on Friday, 05 June 2020 21:40
More in this category: « COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် သီးသန့်စောင့်ကြည့်ရမည့်သူများအား နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မော်လမြိုင်တို့ရှိ စစ်ကြောရေးနှင့်တည်းခိုရေးစခန်းများနှင့် နယ်မြေခံသင်တန်းကျောင်းတို့၌ ဆက်လက်လက်ခံ	နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စုစည်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး »